विवाहपछि थर परिवर्तन कति आवश्यक छ र किन ? » Enavanari
विवाहपछि थर परिवर्तन कति आवश्यक छ र किन ?
कविता शर्मा, नायिका
हाम्रो देश नै पितृसतात्मक भएकाले पहिला पहिला आफ्नो थरले श्रीमती चिनिनु पर्छ भन्ने धेयले यो लागू भएको होला तर विवाहपछि थर परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुँदै होइन । थर र वैवाहिक सम्बन्ध अलग कुरा हुन् । महिलाले थर परिवर्तन गर्दैमा पुरुषप्रति समर्पित हुन्छन् भन्ने छैन । अहिले त मलाई लाग्छ, यो कुरा पुरुषले पनि बुझिसकेका छन् र बुझ्ने कुरा पनि हो । आखिर विवाह गरेर महिलाले सम्पूर्ण कुरा त्याग गरेका हुन्छन् । त्यही थरकै कारण कुनै महिला, कुनै पुरुषको हुने भन्ने भ्रम मात्र हो । थर परिवर्तन चाहिँ महिलाको स्वतन्त्रताको विषय पनि हो । यसमा कसैले हस्तक्षेप गरेर तिमीले यही थर राख्नुपर्छ भन्न पाउँदैनन् ।
राम गोपाल आशुतोष, सञ्चारकर्मी
आजकालका महिलामा जे कुराको पनि स्वतन्त्रता छ । यसमा यही थर राख्नुपर्छ वा पर्दैन भनिरहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुन त विवाहसम्बन्धी धेरै भ्रमहरु छन् । पहिले र अहिलेको विवाहमा परिवर्तन पनि हुँदै गएको छ । जसले गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुराहरु पनि बढ्दै गएका छन् । पहिला पहिला श्रीमान्को नामले चिनिने र चिनाउने चलन भएकाले यो कुराले खासै असर गरेको देखिदैन्थ्यो । यो समस्या गरिब मुलुकमामात्र ब्याप्त रहेको पाइन्छ । हुनत यसको अहिले चर्चा धेरै हुने गरेको छ तर यो समस्या नै होइन । महिलाले यो बुझ्न जरुरी हुन्छ, मानिस थरले होइन, कर्मले चिनिन्छ र महिलाले आफू रुल बन्ने कि रुलिङ् बनाउने भन्नेकुरा सोच्नुपर्छ । पुरुषले पनि अहंम छोड्नुपर्छ ।
दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता
आधुनिक युगको मूल्य मान्यताअनुसार विवाह पछि पुरुषको थर अनिवार्य भन्ने हटिसकेको छ । वास्तवमा विवाहपछि थर परिवर्तन गर्ने कुरा आवश्यक पनि होइन । यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । कुनै पनि महिलालाई विवाहपछि थर परिवर्तन गर्नैपर्छ भनेर संकुचित बनाउन भने हँुदैन । मानवअधिकारका आधारमा हेर्ने हो भने जुनसुकै कुराको पनि व्यक्तिगत हक र अधिकार हुन्छ भन्ने उल्लेख छ । जसअनुसार जसले पनि व्यक्तिगत कुरामा आफंैले स्वतन्त्ररुपले निर्णय लिन सक्छ । हरेकको आफ्नै पहिचान हुन्छ, थर परिवर्तन गरेर श्रीमानको पहिचानमा बाँच्नु पर्छ भन्ने हँुदैन त्यसैले थर परिवर्तनमा कसैले बाध्य पार्नु राम्रो होइन ।
उत्तम आर्चाय, शिक्षक
थर परिवर्तन आवश्यक होइन । जन्मदेखि हुर्किउन्जेलसम्म महिलाको जुन पहिचान हुन्छ, त्यही पहिचानमा सायद महिला रमाएका पनि हुन्छन् । त्यसैले जन्मघरमा रहुञ्जेल एउटा थर र विवाह गर्नेवित्तिकै अथवा अर्काको घरमा जाने वित्तिकै अर्को थर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित होइन । हुन त यो ट्रेन विस्तारै हट्दै गएको पनि छ तर विवाहअघि नागरिकता नबनाएकाले विवाहपछि नागरिकता बनाउँदा पतिको नाम थर राख्ने गरेको पाइन्छ । झट्ट हेर्दा सरकारले पनि पतिको थरलाई आधार बनाएको हो जस्तो पनि देखिन्छ तर मेरो विचारमा विवाहपछि थर परिवर्तन आवश्यक जस्तो लाग्दैन ।
सरिता श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक अस्मिता महिला प्रकाशन गृह
अस्ट्रेलियामा ८० प्रतिशत, अमेरिकामा ९४ प्रतिशत, जापानमा ९६ प्रतिशत महिलाले विवाहपछि श्रीमान्को थर राख्छन् तर ग्रीस र बेल्जियममा भने विवाहपछि श्रीमान्को थर राख्न अवैध मानिन्छ । नेपालमा पनि विवाहपछि महिलाले श्रीमान्को थर जोडेर राख्ने चलन छ । तर केही समययता परिवर्तन पनि आएको छ । कोही महिला यदि स्वयम चाहन्छन् भने त्यसो गर्न पाउनुपर्छ । धेरैजसो महिलाहरु जो विवाहअघि नै समाजमा आफ्नो क्षमताका कारण शैक्षिक, व्यवसायिक, सामाजिक, अथवा राजनीतिकरुपले स्थापित भइसकेका छन् भने उनीहरु त्यो चाहदैनन् तर यदि यस्तो अवस्था छैन भने महिलाहरु श्रीमान्को थर जोड्न चाहन्छन् । लैंगिक समानता र महिला अधिकारका सम्बन्धमा उपलब्ध ठूलो प्रगतिका बावजूद पनि महिलालाई विवाहपछि यदि आफ्नो नामको पछि श्रीमान्को नाम वा थर राख्न दबाब दिइन्छ भने न्यायोचित होइन ।
सरु जोशी श्रेष्ठ, महिला अधिकारकर्मी
थर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ छैन वा यो सही या गलत के हो भन्नेभन्दा पनि विवाहित महिला के चाहन्छन् भन्ने हो । हुन त थर परिवर्तन नगर्न धेरै प्रयासहरु पनि भएका छन् । कतिपय अवस्थामा थर परिवर्तन आवश्यक नभए पनि परम्परागत सोचाई तथा मैले थर परिवर्तन गरिनँ भने मलाई परिवार तथा समाजले के भन्ला भन्ने सोचाईले पनि थर परिवर्तन गरेका हुन्छन् । कसैले दुवै थर पनि राखेका हुन्छन् । यसमा ठीक र बेठिकभन्दा पनि कस्तो सन्दर्भ छ भन्ने हुन्छ । थर परिवर्तनमा महिला स्वयले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आजकाल विवाह पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । एक जनासँगमात्रै विवाह हुन्छ भन्ने नभएको सन्दर्भलाई हेरेर व्यक्तिगत निर्णय लिनु नै सही हुन्छ ।
-प्रस्तुति ःकृष्णा चौलागाई